Wararka - Suuqa Madasha EV
Suuqa Suuqa EV (Qeybta: Chassis, Batariga, Nidaamka Joojinta, Nidaamka Steering, Drivetrain, Gudaha Baabuurka, iyo Kuwa kale; Nooca Baabuurka Korontada: Baabuurka Korantada ee Isku -dhafan iyo Baabuurka Korontada Baabuurka; Kanaalka Iibka: OEM iyo Suuqa gadaashiisa; Nooca Baabuurka: Hatchback, Sedan, Gaadiidka Adeegga, iyo Kuwa kale; iyo Madal: P0, P1, P2, P3, iyo P4) - Falanqaynta Warshadaha Caalamiga ah, Cabbirka, Wadaagga, Kobaca, Isbeddellada, iyo Saadaasha, 2020 - 2030
Adkeynta Shuruucda Deegaanka iyo Baahida Ba'an ee Gaadiidka Korontada si kor loogu qaado Kobaca Suuqa
Iyada oo ay ugu wacan tahay hormarka teknolojiyadda ee cajiibka ah iyo muuqaalka sharciyeynta ee sii xumaanaysa, waaxda baabuurta ee caalamiga ah ayaa aragtay isbaddallo aad u weyn dhowrkii sano ee la soo dhaafay. Waqtigan xaadirka ah, waaxda baabuurta ee hadda adduunka oo dhan ayaa si isa soo taraysa ugu sii socota xagga mustaqbal waara iyo cagaar, halkaas oo OEM -yaasha iyo daneeyayaasha kale ay ku qasban yihiin inay maal gashadaan teknolojiyad cusub iyo hal -abuurnimo u hoggaansan hannaanka sharciyeynta ee isbeddelaya. Tobankii sano ee la soo dhaafay, gawaarida korontada ayaa caan ka noqday dunida oo dhan. In kasta oo wacyiga ku saabsan gawaarida korontada uu sii kordhayo adduunka oo dhan, iyada oo ay jirto, iibinta caalamiga ah ee gawaarida korantada ayaa sii socota inay ku sii socoto jihada sare - arrin la filayo inay kor u qaaddo kobaca suuqa madal ee caalamiga ah ee EV.
Baahida loo qabo gawaarida korantada ayaa ah qodobka ugu horreeya ee la filayo inuu kaxeeyo suuqa madal ee EV inta lagu jiro xilliga qiimeynta. Shirkadaha ka shaqeeya suuqa madal ee EV ee hadda jira ayaa si isa soo taraya diiradda u saaraya sidii ay macaamiishooda ugu fidin lahaayeen aagag wax-ku-ool ah oo hufan, iyo isku-xidhka farqiga u dhexeeya mashiinnada baabuurta korontada iyo mashiinnada gubidda gudaha (ICEs). Dhowr ciyaartoy oo heer sare ah oo suuqa ku jira ayaa sidoo kale la filayaa inay bilaabaan aalado cusub oo EV ah muddada tobanka sano ee soo socota-arrin ay u badan tahay inay gacan ka geysato koritaanka suuqa madal ee EV-ga inta lagu jiro xilliga saadaasha.
Dhamaadka arrimahan, suuqa caalamiga ah ee EV waxaa la filayaa inuu dhaafo sumadda $ 97.3 Bn dhamaadka 2030.
Ciyaartoyda Suuqa waxay diirada saaraan in la isku xiro Faraqa Qiimaha u dhexeeya ICE iyo matoorada korontada
In kasta oo baahida loo qabo baabuurta korontada ay aragtay koboc joogto ah dhowrkii sano ee la soo dhaafay, in yar oo ka mid ah OEM -yada ayaa macaash badan ka hela iibinta baabuurta korontada. Farqiga qiimaha ballaaran ee u dhexeeya matoorada korontada iyo ICE-yada ayaa ah qodobka ugu weyn ee la filayo inuu wado hal-abuurnimo isla markaana u gogol-xaaro moodooyinka madal ee EV-ga ee mustaqbalka dhow. Qiimaha sare ee baytariyada korontadu waa mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan ee baabuurta korontada loo qiimeeyo marka loo eego kuwa isku-jira ama baabuurta ka shaqeeya dhismaha ICE-ga. Natiijo ahaan, dhowr ciyaartoy oo ka hawlgala muuqaalka suuqa madal ee EV ayaa raadinaya habab cusub oo ay ku magdhabaan kharashyadan iyaga oo diiradda saaraya naqshadeynta EV -ga oo ah goob la miisaami karo. In kasta oo dhowr OEMs ay sii kordhinayaan maalgelinta horumarinta aaladaha EV ee ujeeddada loo dhisay si loo soo saaro gawaarida korantada, kuwa kale waxay ugu horreyn ku tiirsan yihiin dhismaha ICE-ga ee soo-saarka gawaarida korantada. Iyaga oo doonaya inay ka dhigaan soo -saarka baabuurta korontada mid faa'iido leh, ciyaartoyga suuqa ayaa si isa soo taraysa sahaminaya fikradaha kala duwan, oo ay ku jiraan khadadka shirarka fudud.
Ciyaartoyda Suuqa ayaa diirada saaraya sidii ay u bilaabi lahaayeen Aalado Cusub oo EV ah si ay u Helaan Tartanka Tartanka
Markhaati -ka -qaadista baahida sii kordheysa ee gawaarida korantada iyo saadaalinta gelitaanka sare ee gawaarida korantada mustaqbalka, dhowr shirkadood ayaa hadda u janjeera inay bilaabaan aalado cusub oo EV ah si ay u helaan tartan tartan oo ka jira muuqaalka suuqa ee hadda jira. Intaa waxaa sii dheer, in kasta oo shirkadaha heerka sare ay sii kordhinayaan maalgashiga soo saarista aaladaha hal -abuurka leh ee EV, dhowr bilow ah ayaa soo galay suuqa madal ee EV, waxayna la abuurayaan isbahaysiyo istiraatiiji ah ciyaartoy kale oo suuqa ah si ay u aasaasaan joogitaankooda suuqa madal ee aadka loo tartamayo ee EV. Tusaale ahaan, REE Automotive, bilowga Israa’iil wuxuu iskaashi la yeeshay Shirkadda KYB ee Japan si uu u bilaabo joojinta ugu dambeysa ee aaladaha gawaarida korantada ee mustaqbalka. Shirkadda KYB ayaa la filayaa inay bixiso khadkeeda nidaamyada hakinta nus-firfircoon iyo firfircoon ee madal EVE REE.
Intaa waxaa dheer, dhowr OEMs oo hormuud ah ayaa si isa soo taraysa diiradda u saaraya dhisidda aaladaha EV ee u heellan si ay u aasaasaan joogitaan adag oo suuqa ah. Tusaale ahaan, Febraayo 2019, Hyundai waxay ku dhawaaqday in shirkaddu ay u badan tahay inay soo saarto madal gaar ah oo koronto ku shaqeeya oo ay ugu horrayn adeegsan doonaan baabuur koronto oo cusub oo ay shirkaddu soo saartay.
Dalbashada Qalabyada EV ee Hoos u dhaca sannadka 2020 iyada oo ay jirto Faafida COVID-19
Qeybta gawaarida adduunka ayaa la kulmay dib u dhac weyn sanadka 2020 sababtuna tahay dillaaca cudurka faafa ee COVID-19. Bilaabashada masiibada COVID-19 waxay u guurisay koboca suuqa madal ee EV-ga haadka qunyar socodka ah ee 2020, maaddaama qaybta baabuurta ee Shiinaha ay xirneyd gaar ahaan rubucii hore ee 2020. Taas awgeed, bixinta agabka ceyriinka ah iyo qaybaha baabuurta ayaa si weyn u saameeyay dunida oo dhan. Si kastaba ha noqotee, markii Shiinuhu si tartiib tartiib ah u furay warshadihiisii, xarumaha kale ee baabuurta waaweyn ayaa xaddidayay ganacsiga xudduudaha iyo gaadiid ahaan si looga hortago faafitaanka fayraska.
Suuqa madal ee EV ayaa la filayaa inuu si tartiib tartiib ah u kobco rubuc -dhammaadka 2020, maaddaama baahida caalamiga ah ee markhaatiyaasha EVs ay tahay koboc joogto ah ka dib nasinta xannibaadaha xiridda iyo ganacsiga.
Suuqa caalamiga ah ee EV waxaa la filayaa inuu ku fido CAGR dhexdhexaad ah ~ ~ 3.5% inta lagu jiro xilliga saadaasha. Kobaca suuqa waxaa ugu horreyntii horseed u ah baahida sii kordhaysa ee baabuurta korontada, kordhinta taageerada dawladda ee baabuurta korontada, horumarinta tiknoolajiyadda baabuurta korontada ee ugu jaban, iyo adkaynta sharciyada iyo xeerarka ilaalinta deegaanka. Ciyaartoyda suuqyadu waa inay diiradda saaraan sidii ay u bilaabi lahaayeen aalado baabuur koronto oo hal-abuur leh oo kharash-ku-ool ah si ay u helaan tartan tartan oo ay saldhig adag uga yeeshaan suuqa.
Suuqa Suuqa EV: Guudmarka
Suuqa caalamiga ah ee EV waxaa la filayaa inuu ku fido CAGR oo ah 3.5% inta lagu jiro xilliga saadaasha. Tan waxaa ugu horreeya caadooyinka sii -deynta qiiqa ee baabuurta oo ay weheliso dhiirrigelinta isku -darka iyo korontada baabuurta si loo yareeyo saameynta gaasaska qiiqa ee waxyeellada u leh deegaanka. Xeerarka dawladda ee ka dhanka ah baabuurta naaftada iyo baatroolka ayaa sabab weyn u ah is -beddelka macaamiisha ee xagga baabuurta korontada waxayna kor u qaadeysaa baahida loo qabo madal EV inta lagu jiro xilliga saadaasha.
Suuqa loogu talagalay EVs wuxuu ku sii fidayaa xawaare aad u weyn oo maalgelinta marxaladda hore aad bay ugu saraysaa basaska, maaddaama dawladaha gobollada intooda badan ay si weyn u maalgelinayaan magaalooyinka waaweyn si wax looga qabto qiiqa kaarboonka oo ay u badan tahay inuu kor u qaado suuqa madal EV. Goobta EV ee basaska korontada ayaa marqaati u ah baahida sare ee dhaqaalaha badankood, maadaama korontada madal dadweyne ay u badan tahay inay si wax ku ool ah u saamayso hagaajinta tayada hawada.
Darawalada Suuqa Platform -ka EV
Markii hore, magacyada waaweyni waxay doorbideen inay horumariyaan hal madal oo ah afar shan nooc si loo xaddido maalgashiga raasumaalka. Si kastaba ha noqotee, dalab badan oo ka yimid iibsadayaasha baabuurta ee astaamaha gaarka ah ee gobolka, qaabaynta, iyo waxqabadka, oo ay kujirto qayb ka mid ah gaar ahaanshaha baabuurka ayaa ku dhiirrigelisay OEMs inay horumariyaan barxado kala duwan oo loogu talagalay moodooyinka kala duwan, taas oo ay u badan tahay inay kor u qaaddo suuqa madal EV inta lagu jiro xilliga saadaasha.
Shidaalka fossilku waa mid xadidan oo dhowaan, kaydka shidaalka fossil waxay u badan tahay inuu dhammaado. Marka loo eego xaddiga hadda la isticmaalo, qiyaastii 46.7 sano oo kheyraadka shidaalka ah ayaa ku harsan daafaha dunida, iyo 49.6 sano ee kheyraadka gaaska dabiiciga ah ayaa weli ku harsan adduunka. Beddelka shidaalka fossil -ka ayaa laga heli karaa suuqa, oo ay ku jiraan baabuurka korontada, CNG, LPG, baabuurka hawada ku shaqeeya, iyo LNG. Si kastaba ha ahaatee, baabuurta korontada ayaa si isa soo taraysa loo qaadanayaa, kuwaas oo si joogto ah loogu isticmaalo gaadiidka magaalooyinka iyo magaalooyinka waaweyn. Tani, iyaduna, waxay u badan tahay inay xal u tahay helidda xaddidan ee kheyraadka dabiiciga ah. Tan waxaa lagu qiyaasaa inay kor u qaadeyso suuqa madal EV.
Dhowr soo-saarayaal, sida Tesla Inc. iyo Nissan, waxay soo bandhigeen wax-qabadyada EV-yada ee ku shaqeeya madal cusub oo EV ah oo ka xasilloon waddooyinka waxayna bixiyaan socod fudud oo aan dhib lahayn. Qiimaha dayactirka oo hooseeya ee EVs, oo ay ugu wacan tahay naqshad cusub oo ka jirta madasha EV ayaa ahayd dheef dheeri ah, oo ay u badan tahay inay ka faa'iideysato macaamiisha muddada fog. Tani, iyaduna, waxay u badan tahay inay kiciso suuqa madal ee EV.
Caqabadaha Suuqa Platform EV
Qiimaha baabuurta korontada marka la barbar dhigo kuwa ICE -ga caadiga ah (mishiinka gubista gudaha) baabuurtu aad bay u sarreeyaan waxaana loo tixgeliyaa inay tahay qodobka xakamaynta koowaad ee baabuurka korontada iyo suuqa madal ee EV
Baabuurta ku shaqeeya korontada waxay u baahan yihiin saldhigyo lacag -bixin, iyo shabakad saldhigyadaas oo ku yaal meel xeeladaysan ayaa looga baahan yahay dadka inay u safraan masaafo dheer. Intaa waxaa dheer, dib -u -buuxinta baytariyada badanaa waxay qaadataa 1 saac, taas oo aan meelna u dhigmin hufnaanta shidaalka gaaska, taas oo sii xannibaysa suuqa madal ee EV.
Qeybinta Suuqa Platform EV
Iyada oo ku saleysan qayb, qaybta batteriga ayaa la saadaalinayaa inay xisaabin doonto qayb weyn oo ka mid ah suuqa madal ee EV inta lagu jiro xilliga saadaasha. OEM -yaasha ayaa diiradda saaraya soo saarista batteriga EV ee horumarsan oo la filayo inuu ku sii daayo qiiqa qiimayaal aad u hooseeya, taas oo horseedaysa maalgelin badan R&D qeybta batteriga iyo ugu dambeyn mashiinka EV.
Iyada oo ku saleysan nooca gawaarida korantada, qeybta gawaarida korantada ee batteriga ayaa si xawli leh ugu fidaysa suuqa madal ee EV. Inta badan OEMs -ku waxay diiradda saarayaan horumarinta gawaarida korantada ee batteriga ee aaladaha cusub ee EV ee la horumariyey halkii ay ka ahaan lahaayeen gawaarida korantada isku dhafan, maadaama baahida loo qabo BEVs ay ka badan tahay tan HEV -yada. Waxaa intaa dheer, maalgelin raasumaal oo aad u sareysa iyo khibrad ayaa loo baahan yahay si loo horumariyo HEV marka la barbardhigo tan BEV, maadaama BEV aysan ku jirin ICE -ga masraxa EV -ka sidaa darteedna, way fududahay in la dhiso.
Iyada oo ku saleysan nooca gawaarida, qeybta gawaarida korontada ayaa qeyb weyn ka qaatay suuqa madal ee EV -ga adduunka. Macaamiisha Shiinaha ayaa doorbida sedan is haysta; si kastaba ha ahaatee, imaanshaha SUV -yada cusub oo aad u soo jiidasho leh ayaa beddeshay dalabkii ku aaddanaa baabuurta korontada. Waxaa hoos u dhac ku yimid iibinta sedan -ka. Uma faa'ido badan yihiin sida hatchbacks ama ka waasac badan sida SUVs iyo macaamiisha Aasiya iyo Mareykanka waxay doorbidaan baabuurta waasac ah iyo kuwa waxtarka leh labadaba. Hoos -u -dhac ku yimid dalabka dib -u -kicinta ee Yurub iyo Laatiin Ameerika waxaa sabab u ah kororka xajmiga baabuurta yar yar. Markay sii weynaadaan hatchback -ku, way sii yaraanayaan waxqabadkooda iyo dhaqdhaqaaqooda.
Suuqa Suuqa EV: Falanqaynta Gobolka
Iyada oo ku saleysan gobolka, suuqa madal ee caalamiga ah ee EV ayaa loo kala saaray Waqooyiga Ameerika, Yurub, Bariga Aasiya, Koonfurta APAC, Latin America, iyo Bariga Dhexe & Afrika
Kordhinta isdaba joogga ah ee gelitaanka EVs si xawli leh guud ahaan dalal dhowr ah oo ku yaal Bariga Aasiya iyo Yurub ayaa ah qodob caan ah oo horseedaya suuq -geynta caalamiga ah ee EV, maadaama maalgashiga R&D ee dalalkan uu sii kordhayo. Yurub waxay aragtaa koror xoog leh oo gelitaanka EVs. Marka xigta, baahida loo qabo EVs ayaa la filayaa inay kor u kacdo inta lagu jiro xilliga saadaasha, taas oo ay u badan tahay inay kor u qaaddo suuqa madal EV.
Suuqa madasha ee Bariga Aasiya EV ayaa la filayaa inuu si weyn u ballaadhiyo, oo ay ku xigto Yurub iyo Waqooyiga Ameerika. Warshadaha baabuurta ee waddamada, oo ay ku jiraan Shiinaha, Japan, iyo Kuuriyada Koonfureed waxay u janjeeraan xagga teknolojiyadda, hal -abuurka, iyo horumarinta EVs -ka horumarsan. Horumarinta saldhigyada lacag -bixinta oo aad u horumarsan oo degdeg ah ayaa la saadaalinayaa inay kiciyaan suuqa madal ee EV iyo EV. BYD, BAIC, Chery, iyo SAIC waa ciyaartoy muhiim ah oo ka shaqeeya suuqa Bariga Aasiya EV, waxay xisaabtamaan saamiga ugu badan ee suuqa madal ee EV.
Suuqa Suuqa EV: Muuqaalka Tartanka
Ciyaartoyda muhiimka ah ee ka shaqeeya suuqa madal ee EV waxaa ka mid ah
Shirkadda Alcraft Motor
OEM -yada qaarkood waxay doortaan inay soo saaraan BEV ama PHEV oo ku yaal madal ICE oo la habeeyay si loo xaddido maalgashiga raasumaalka waxayna mas'uul ka yihiin wax soo saar dabacsan. Naqshadaynta qaabaysan ee loogu talagalay baabuurta ICE waxay la kulmaan caqabado ku jira baakadaha batteriga. Tusaale ahaan, Kooxda VW waxay damacsan tahay inay dhisto EVs dhammaan cabbirrada iyadoo la adeegsanayo dhowr qaybood oo isku mid ah si ay uga dhigto moodellada elektaroonigga ah faa iido. Shirkaddu waxay damacsan tahay inay baabuurta MEB ka dhisto siddeed goobood, adduunka oo dhan, marka la gaaro 2022. Intaa waxaa dheer, waxay saadaalineysaa inay ku iibin doonto 15 milyan oo baabuur madal EV ah tobanka sano ee soo socda.
E Biyo -mareenka, Best Battery Battery Charger Battery, Baaskiilka Buluuga ah ee Fudud, Puck Side Stand, Cidhiidhiga Baaskiilka, 22.5 Daboolida Gawaarida,